Serivisy fitokisan-tany ho an'ny fananana trano sy trano
Inona no atao hoe Trust Trust?
Ny fitokisana momba ny tany dia rakitra iray noforoninay izay ahafahanao mihazona trano mitokana, ka ny anaranao dia tsy miseho eo amin'ny lohateny ao amin'ny rakitsoratry ny daholobe.
Andao atao hoe miditra anaty alàlan'ny fiara ianao. Manana $ 1 tapitrisa fiantohana ianao. Saingy nandona mpiantam-bola ianao ary maty tamin'ny $ 3 tapitrisa ianao. Raha manana ny tranonao sy ny fananana fampiasanao amin'ny anaranao manokana ianao, ilay mpisolovava nanolotra anao dia ho hitanao mora foana ny tranonao sy fananana hafa ao anaty firaketam-bahoaka. Raha manana trano ianao dia mampiseho fitoniana ara-bola vitsivitsy ary ny mpisolovava dia mety handefitra ilay fitoriana.
Ilay mpisolovava mpanohitra dia afaka misintona avy hatrany ny mpihiratra eo anoloan'ny tranonao, mijanòna eo am-baravaranao rehefa mihinana sakafo hariva ianao ary mampandre anao eo anatrehan'ny mpifanolo-bodirindrina aminao. Na izany aza, rehefa manana ny tokantranonao anaty trano ianao, dia miafina ny fanananao. Ny fahatokisan'ny tany dia tsy voatery halefa any amin'ireo rakitsoratra ho an'ny daholobe. Dia mitazona ny fanananao manokana. Tsy misy olona tokony hahalala ny tranonao fa ianao.
Ny faritry ny tanin-tany dia manana singa efatra: Number 1 no mponiny. Izany dia satria ianao no olona iray namorona ny fitokisana. Nomeran'ny 2 no mpamatsy vola. Ny fitokisana dia mametra ny fifehezan'ny Trustee eo ambanin'ny fe-potoana voatondro. Izany dia mety ho rahavavy na rafozan-dalàna, namana azo itokisana na mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Mba hampivoarana ny fiainanao manokana, tsara ny misafidy olona tsy manana ny anaranao. Mila matoky azy avokoa ny fitokisana rehetra fa noho io karazana fahatokisana io dia manery ny fifehezana azy ireo ny fitokisana. Ny nomeraon'ny 3 no mpandray tombony. Izay no mahazo ny soa rehetra azo atokisana. Izany dia ianareo (na olona iray na maromaro na orinasa notondroinareo).
Ny mpandray tombony dia afaka manana ny fahefana rehetra. Ny mpitaly dia afaka mitarika rehefa mividy sy amidy ny fananana. Ankoatr'izay, ny mpandray tombony dia ilay afaka manamboatra ny trano na afaka manangona ny vola miditra amin'ny vola amin'ny fampiasam-bola. Farany, ny laharana 4 dia ny corpus-ny fitokisana. Ny corpus no renivohitra na orinasa (zavatra manan-danja) ao anatin'ny fitokisana.
Tombontsoa azo itokisana
Ny zavatra lehibe dia ny hoe ny tombom-bidy ambony indrindra dia mijanona ho manao hetsika. Amin'ny fahatokisana voalamina tsara, rehefa mivarotra ny tranonao ianao dia mijanona ny tombontsoa ho an'ny hetra. Raha efa nipetraka tao an-trano nandritra ny roa tao anatin'ny taona 5 farany ianao dia tsy mila mandoa hetra amin'ny tombom-barotra rehefa mivarotra hatramin'ny $ 250,000 tombony ho an'ny olona tokana na $ 500,000 ho an'ny mpivady. araka ny tokony.
Ny zavatra vitanao dia ny fiainana manokana ny fananana.
Inona no holazain'ilay mpampindrana?
Ny lalàna Garn - St Germain Depositutions Institutions an'ny 1982 dia manome alàlana manokana ny olona iray hametraka ny fananan'ny olona iray ho karazana karazan-tany izay iantsoanay azy nefa tsy manelingelina ny fe-potoana nivarotra. Midika izany fa afaka mandefa ny fanànana tranom-bola amin'ny fahatokisana ny tany tsy misy fanelingelenana avy amin'ny banky. Ity no zava-misy raha toa ka mbola mahazo tombony ny mpampindram-bola, ny trano dia manana latsaky ny dimy fonenana fonenana, azo averina ny fitokisana ary tsy mitondra ny zon'ny fahazoana olona amin'ny hafa.
Instituto de 1982
TITLE 12> TOKO 13 § 1701j – 3
§ 1701j – 3. Fialana amin'ny fandraràna tsy maintsy aloa amin'ny fotoana amidy
d) Fanavotana ireo fananana voalaza na
Raha ny momba ny findramam-bola tena izy
nohamafisin'ny liam-pananana amin'ny fananana trano fonenana misy latsaky ny dimy
trano fonenana, anisan'izany ny lien amin'ny tahiry natokana amin'ny trano fonenana ao a
orinasa mpanampy orinasa, na amin'ny trano amboarina fonenana, a
Ny mpampindram-bola dia mety tsy hampihatra ny safidiny araka ny fanamarinana am-pahamendrehana an-
(8) ny famindrana ho fitokisana amin'ny fiainana andavanandro
izay mpampindram-bola dia mijanona ho mpahazo tombontsoa ary tsy mifandraika amin'ny
famindrana ny zon'ny fibodoana ao amin'ilay fananana; na
(inter vivos trust = Ny toky noforonina mandritra ny androm-piainan'ny settlor. I settlor no olona namorona ny fitokisana. Ny karazana fitokisan'ny tany izay tondroina dia fifampatokisana eo amin'ny vivos.)
Aiza no Azoko Ampiasaina Hanana Toe-karena?
Mampiasa ny fahatokisan-tany amin'ny fanjakana 50 daholo ny olona. Ny statistika sasantsasany dia tsy manondro firy amin'ny fahatokisan'ny tany fa ny olona dia mampiasa izany any amin'ny firenena rehetra. Ny olona sasany dia nanao ny hadisoana hoe: "Ny fitokisan'ny tany dia tsy voalaza ao amin'ny lalàn'ny fanjakako, noho izany dia tsy ara-dalàna izy ireo." Aiza ireo lalàna izay milaza fa misy olona afaka manao kiraro mena? Mialà eo ambonin'ny sofina? Misotroa avy amin'ny mololo mamy? Tsy izay rehetra ataontsika dia manamarina ireo bokin'ny lalàna. Lalàna iombonana, mifanohitra amin'ny lalàna lalàna, ny fomba nandikana ny lalàna sy ny fomba amam-panao mahazatra nandritra ny taona maro. Ny fahatokisana dia ampahany amin'ny lalàna iraisana izay nekena tamin'ny ankapobeny nandritra ny taonjato maro raha tsy misy lalàna mifehy azy ireo. Tsy misy lalàna, toy io asa-soratra io, ao amin'ny 50 Etazonia milaza fa mifanohitra amin'ny fampiasana fahatokisan-tany.
Teti-bola momba ny fatiantoka ara-barotra
Ny iray tamin'ireo mpanjifanay dia nandeha an-tongotra teo amin'ny tokotanin'ny iray tamin'ireo trano. Notapahiny ny kitrokeliny, ary nisy rà izy ary maty. Nolavin'izy ireo ny zava-drehetra nananany mihoatra noho izay azon'izy ireo natao. Raha nanao zavatra iray izy ireo dia naka ny fananany tany amin'ny tanin-tany izay mety tsy ho nitranga. Tsy ny hoe ny fahatokisana no manafoana ny andraikitra. Izany dia, ny fomba ametrahantsika ny fitokisan'ny taninao, tsy misy olona tokony hahalala fa manana tombontsoa amin'ny fitokisana fananana ianao fa IANAO. Noho izany, zava-miafina ny hoe iza no hiampangana ilay mpisolovava. Tsy maintsy mandany vola be ry zareo mba hahalalany raha toa ka manadino anao izy.
Iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny biraonay no nividy ny fananany voalohany amin'ny fanjakana any Washington. Izany dia trano fandefasana 6-abidy efa-bolana. Nanakarama mpiantoka iray hanamboatra azy izy io. Saingy ilay con-traktera nody ho mpanakanto con. Tamin'ny ady ara-dalàna izy dia naharitra 4 taona ary nitentina $ 157,000. Raha tsy nanao afa-tsy zavatra iray izy dia fananany amin'ny fitokisan-tany fa tsy amin'ny anarany ihany. Mety tsy ho nitranga izany. Saingy, ny mpanohitra dia nahita fa nanana trano izy ary trano fanobiana vola, ka dia nanapa-kevitra ny hitory izy ireo.
Noho izany, ny fanananao ny taninao izay fanananao ny fananana dia afaka manome anao ny fiainana manokana hiaro anao amin'ny fahaverezanao ny tranonao, ny fiaranao, ny kaontinao amin'ny banky ary ny 25% amin'ny fidiram-bolanao hoavy ao anatin'ny 20 manaraka. Indray mandeha ihany, io, irery, dia tsy fitaovana fiarovana. Ny tanjona dia ny hiaro ny tena trano amin'ny maso mitrandraka. Raha tokony hanana lohateny amin'ny fananana misy anao amin'ny anaranao mba ho hitan'ny rehetra, dia manome sakana eo aminareo sy ireo tsy manana ny mahaliana anao indrindra. Noho izany, mety hampihena ny vinavina hapetraka io fitoriana io.
Ny orinasa antso an-tariby dia mifandray amin'ny solontenany. Rehefa avy nandidy ianao, dia alefaso mailaka aminao ny fanontaniana misy anao. Hamita ny valin'ny fangatahana ianao ary hamerina azy amin'ny alàlan'ny fax. Ho voaomana ny antontan-taratasyo. Ny tetik'asa azo itokisana, izay pejy 12 eo ho eo, no hovorina. Mitazona izany ianao ao amin'ny trano fandefasana rakitra ao an-trano na ao anaty boaty azo antoka. Ny fanomezana an-tsitrapo, ny famindrana ny fanananao amin'ny anaranao amin'ny fitokisanao dia homanina ihany koa. Ity rakitra ity dia voarakitra ao amin'ny biraon'ny mpitan-tsoratra ao amin'ny kaontin'ny faritra misy ny tranobe. Ny fametrahana ny taratasy mahaliana tombontsoa, ​​izay mandika ny tombontsoa mahasoa amin'ny fanananao amin'ny orinasa iray, ny olona na ny fitokisana velively dia ho tafiditra ao koa raha misafidy ity safidy malalaka ity ianao.